Chelsea oo bar-tilmaameed saneysa saxiixa Jan Oblak si uu ugu noqdo badalka Thibaut Courtois – Gool FM
Chelsea oo bar-tilmaameed saneysa saxiixa Jan Oblak si uu ugu noqdo badalka Thibaut Courtois
(Chelsea) 01 Agoosto 2018. Sida ay shaaca ka qaadeen wargeysyada gudaha dalka England kooxda Chelsea ayaa ka dhiganeysa bar-tilmaameed xoogan saxiixa Jan Oblak inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Wargeyska “Daily Mail” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda Blues ay xiiseeneyso in ay hesho adeega 25 jirkan reer Slovenia, si ay kaga dhigato badalka Thibaut Courtois oo la filayo inuu ka dhaqaaqo garoonka Stamford Bridge.
Thibaut Courtois ayaa wuxuu yabooh xoogan kaga imaanayaa Real Madrid oo dooneysa inay ka dhigato goolhaayaheeda koowaad ee mustaqbalka fog.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in maamulka kooxda reer London ee Chelsea ay haatan diyaarinayaan qiimo dhan 100 million euros si ay u kansalaan heshiiska Jan Oblak uu ku joogo kooxda reer Spain ee Atlético Madrid.
Si kastaba Jan Oblak ayaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay goolhaayaasha ugu wanaagsan aduunka xiligan la joogo, taasoo sababtay in Blues ay ka dhigato dooqa koowaad hadii ay dhacdo inuu ka dhaqaaqo Thibaut Courtois.
Manchester United oo dib u soo cusbooneysiisay wada hadalada ay ku dooneyso xidig ka tirsan kooxda Barcelona